Degdeg: Lionel Messi oo ka hadley inuu joogayo Barcelona, ​​ –
Home Lionel Messi Degdeg: Lionel Messi oo ka hadley inuu joogayo Barcelona, ​​
Degdeg: Lionel Messi oo ka hadley inuu joogayo Barcelona, ​​
Taageerayaasha kooxda Barcelona ayaa neefsan kara xasilooni – Lionel Messi ayaa xaqiijiyay inuu sii joogi doono kooxda xiliciyaareed kaan.
Messi ayaa ku wargaliyay kooxda reer Catalan inuu doonayo inuu baxo ka dib markii ceebtii 8-2 ee ay kala kulmeen Bayern Munich wareega quarter-finalka Champions League bishii Ogosto 14 ay ka dhigtay inay ku dhameystaan ​​xilli ciyaareedka 2019-20 koob la’aan.
Ciyaaryahanka lixda jeer ku guuleystay Ballon d’Or wuxuu rajeynayey inuu dhaqaajiyo qandaraas qandaraas ah oo u ogolaanaya inuu si kali ah u joojiyo heshiiskiisa Barca, laakiin kooxda – iyo LaLiga – waxay ku adkeysanayaan in lacagta loo baahan yahay in laga wada hadlo ama gabi ahaanba lacagtiisa. 700million ayaa lagu burburin karaa qandaraaskiisa si uu uga tago.
Messi, oo aan wali soo xaadirin tababarka isku diyaarinta xilli ciyaareedka ee Ronald Koeman, ayaa qandaraas kula jira Camp Nou ilaa June 2021, waxaana ay u muuqataa haatan inaysan u dhaqaaqi doonin kahor taariikhdaas.
Caawinta Opta, waxaan eegeynaa qaar ka mid ah rikoorrada cajiibka ah iyo guulaha uu Messi la gaaray Blaugrana.
731 kulan oo uu u saftay Barcelona, ​​Messi wuxuu dhaliyay rikoor kooxda ah 634 goolal wuxuuna caawiyay 254 caawin. Taasi waxay u dhigantaa 888 ku lug lahaansho goolal intii uu ku guda jiray xirfadiisa Barcelona, ​​oo bilaabatay isagoo 17 jir ah bishii Oktoobar 2004.
Ma jiro ciyaaryahan dhaliyey goolal ka badan LaLiga marka loo eego Messi oo dhaliyey 444, halka kaliya Cristiano Ronaldo (447) uu ka badan yahay shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub.
Messi wuxuu dhaliyey rikoor 50 gool xilli ciyaareedkii 2011-12 ee LaLiga waana ciyaaryahanka kaliya ee ugu yaraan 10 jeer beddelay 14 olole oo toos ah oo uu ka ciyaaray horyaalka Spain. Wuxuu noqday ciyaaryahanka kaliya ee taariikhda dhaliya ugu yaraan 40 gool naadi 10 xilli ciyaareed oo xiriir ah intii u dhaxeysay 2009-10 iyo 2018-19.
Laga soo bilaabo Nofeembar 2012 ilaa May 2013, ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Argentina ayaa dhaliyay rikoor 21 kulan oo isku xigta oo LaLiga ah.
373 gool 358 kulan oo uu ku ciyaaray Camp Nou, Messi celcelis ahaan 1.04 gool ciyaar kasta oo ka dhacday garoonkiisa Barca. Garoonka Bayern ee Allianz Arena ayaa ah garoonka kaliya ee uu ku soo ciyaaray in ka badan laba kulan isla markaana uu ku guuldareystay inuu shabaqa soo taabto.
Messi wuxuu ku jiray dhanka guul darada 83 jeer tartamada oo dhan oo uu la leeyahay Barca, taasoo u dhiganta 11 boqolkiiba kulamadiisii. In kabadan boqolkiiba 70 ciyaarihii uu udheelay kooxda ayaa kusoo dhamaaday guul.
Messi wuxuu ciyaaray kulamo badan (219) wuxuuna dhaliyay goolal ka badan (211) oo uu u dhaliyay Barcelona intii uu hogaaminayay Pep Guardiola, kaasoo lala xiriirinayay inuu kula midoobayo Manchester City, in ka badan intii uu sameeyay tababarayaasha kale.
Goolkiisii ​​ugu fiicnaa ciyaar kasta wuxuu ahaa 1.20 intii uu hogaaminayay Tito Vilanova, kaasoo uu u dhaliyay 60 jeer 50 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan. Kaliya tababarihiisii ​​ugu horreeyay Frank Rijkaard (0.38) ayuu lahaa celcelis ka liita kii uu u ciyaarayay Quique Setien (0.63).
Xilli ciyaareedkii ugu fiicnaa ee Messi ee goolka hortiisa wuxuu ahaa 2011-12, markaasoo uu dhaliyay 73 gool isla markaana uu dhigay 29 kale – labadaba shaqsi ahaan shaqsiyadeed hal xilli ciyaareed. Sanadkii 2012 wuxuu dhigay rikoor ah goolasha ugu badan ee koox iyo wadan sanad gudihiis, isagoo shabaqa soo taabtay 91 jeer.
33 jirkaan waa ciyaaryahanka ugu goolasha badan taariikhda El Clasico, isagoo shabaqa ka soo taabtay Real Madrid 26 jeer. 15-kii gool ee uu ku dhaliyay garoonka Santiago Bernabeu tartamada oo dhan ayaa ka dhigaysa garoonkiisii ​​ugu waxqabadka badnaa ee uu ku ciyaaro meel ka baxsan.
Guud ahaan wuxuu goolal ka dhaliyay 79 kooxood oo kala duwan, kooxaha uu aadka u jecel yahayna waa Sevilla, oo laga dhaliyay 37 gool 39 kulan oo uu la ciyaaray.
Inta badan goolashiisa (522) waxaa ku dhaliyay lugtiisa bidix, halka 22 ay ahaayeen madax. Wuxuu ururiyey 47 gool oo ka mid ah laadadka tooska ah iyo 75 rigoore.
Messi wuxuu u diiwaan galiyay 48-hat-trick Barcelona; 36 ka mid ah waxay yimaadeen LaLiga, taas oo rikoor ah.
Waxa uu dhaliyay afar gool isla ciyaartaas lix jeer, shan jeerna hal kulan ayuu u beddelay hal jeer, markii uu noqday ciyaartoygii ugu horreeyay taariikhda Champions League ee guulahaas gaadha kulan uu Bayer Leverkusen kula yeeshay Camp Nou bishii Maarso 2012.
Codsiga Messi ee ah inuu baxo ayaa yimid kadib markii sida la sheegay uu tababaraha cusub Koeman u sheegay Luis Suarez inuu raadsado koox cusub. Xiriirkoodu ma ahan oo kaliya mid ka baxsan garoonka dhexdiisa – Suarez wuxuu caawiyay goolal badan oo Barca ay u dhalisay Messi (47) in ka badan ciyaaryahan kale, laakiin ciyaaryahanka reer Uruguay ayaa u muuqda inuu xirfadiisa ku sii wadan doono Juventus.